२० पुष २०७४, बिहीबार २२:२४
काठमाडौं, २० पुस– काठमाडौंमा बिहीवार यस वषकै सबै भन्दा बढी चिसो महसुश गरिएको छ । काठमाडौँको आजको न्यूनतम तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रीसेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम २ दशमलव २ डिग्रीसेल्सियस.....
जाडोमा मुटुका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने ७ कुरा
६ पुष २०७४, बिहीबार २२:१४
बिस्तारै जाडो शुरु हुन थालेको छ । मुटुका विरामीहरुको लागि यो मौसम त्यति अनुकुल मानिदैन । चिसो मौसममा मुटुसम्वन्धी समस्या झनै बढने गरेको पाइन्छ ।बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा ओममूर्ति अनिलले यहि सन्दर्भमा केही टिप्सहरु दिएका छन् । हेरौँ उनका टिप्सहरु.....
१ पुष २०७४, शनिबार १८:१३
आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले धेरै प्रगति गरेको छ । नि:सन्तान दम्पतीको उपचार अनि उपचार सम्भव नभए असिस्टेट रिप्रोडक्टिभ टेक्निक्सहरू अर्थात् शुक्रकिटको बिजारोपण तथा टेस्टट्युब बेबीजस्ता प्रविधि पनि नेपालमा उपलब्ध भएकाले यसको उपाय छ भन्नुपर्छ । सन्तान.....
२३ मंसिर २०७४, शनिबार २०:१८
१३–१४ वर्षकी एक किशोरी डाक्टरसामु बसेकी छिन् । डाक्टर सोध्छन्, ‘तिमी विवाहित हो ?’ किशोरीले आमातिर जिज्ञासु नजरले हेरिन् । सोचिन्– बिसन्चो हुनुमा यो विवाह कुरा कसरी जोडियो ? उनी ‘छैन’को संकेतमा टाउको हल्लाउँछिन् । तर, पछिल्लो दुई सातादेखि उनको.....
१८ मंसिर २०७४, सोमबार ११:२३
जाडोमा स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न समस्या आउन सक्छ । रुँघा, खोकी, जोर्नी दुख्ने, उच्च रक्तचाप जस्ता समस्याले सताउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? सजिलो उपाय हो, सख्खर र दुधको सेवन । दुध, जो हाम्रो भान्सामा नियमित हुन्छ । सख्खर पनि सहजै उपलब्ध हुन्छ.....